Tag: nyocha metrics | Martech Zone
Tag: usoro nyocha
Monday, April 13, 2015 Tuesday, June 16, 2015 Jenn Lisak Golding
Ọbịbịa nke nnukwu data ewetawo ọtụtụ mkparịta ụka dị iche iche gbasara nchịkọta, nsuso na ịre ahịa. Dị ka ndị ahịa, anyị maara n’ezie mkpa ọ dị ịchụso mbọ anyị, mana anyị nwere ike ịba ụba n’ihe anyị kwesiri ịdebe na ihe anyị abụghị; ihe, na njedebe nke ụbọchị, anyị kwesịrị iji oge anyị na-eme ihe? Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ narị metrik anyị nwere ike ile anya, aga m agba gị ume
Izu gara aga m wepụrụ ụbọchị ọrụ ma gaa Webcamp, ogbako mpaghara na Teknụzụ Ntanetị. Ọ bụ ezie na abụ m ọkà okwu nọọrọ onwe m (na ịde blọgụ), amụtara m ọtụtụ ihe banyere ebe na-abụghị bailiwick m. Ihe ịga nke ọma m na ịde blọgụ bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi agụụ na nnukwu nkà na ụzụ. Gingde blọgụ chọrọ ka m bụrụ jaak nke azụmaahịa niile mana ọ nweghị nke ọ bụla. Nzukọ dị ka nke a na-enyere m aka imeziwanye nkà m